Iimpawu zokwazi ukuba kufuneka nditshintshe i-mobile Android | I-Androidsis
Ndazi njani ukuba ndiyitshintshe nini ifowuni yam? Lo ngumbuzo ngokuqinisekileyo ongaphezulu kwesinye oze ngamanye amaxesha. Ngethamsanqa, impendulo ihlala kwifowuni yethu ye-Android. Ukusukela ngokuhamba kwexesha, ifowuni isinika imikhondo ezizimpawu ezicacileyo zokuba ixesha lifikile lokutshintsha ii-smartphones. Kwaye kulula ukuzibona kunokuba abaninzi becinga.
Ke ngoko, apha ngezantsi sikushiya ne le miqondiso isilumkisa ukuba ixesha liyeza Ndikhangela enye ifowuni ye-Android. Kuthetha ukuthini ukuqala ukubonisana kwakhona ngento esemarikeni okanye Izinto ekufuneka ziqwalaselwe.
1 Ukungabikho kwendawo
2 Imisebenzi iyacotha
4 Inguqulelo yakudala ye-Android
5 Iinkcukacha eziphelelwe lixesha
Enye yeengxaki esihlala sijamelana nazo xa i-smartphone yethu ye-Android ibikho ixesha elithile. Uya kuqaphela ukuba nantoni na oyenzayo, ihlala ihleli uphele uphelelwa sithuba emnxebeni. Nokuba usebenzisa ezahlukeneyo iindlela zokukhulula indawo, ifowuni iya kuba ngaphandle kwayo kwakhona emva kwexesha elifutshane.
Le yinto inokwenzeka ngenxa yezizathu ezininzi. Izicelo zinokuba nzima kakhulu, ngakumbi emva kohlaziyo. Kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba kukho abasebenzisi abanezixhobo ezinendawo encinci yokugcina, malunga ne-8 okanye i-16 GB kwezinye iimeko. Oku kunciphisa kakhulu amathuba ememori.
Nokuba silandela iingcebiso ukunceda ifowuni yethu ye-Android ukuba hlala uzinzile maxa onke, kuyeza ixesha xa kuhamba ngokucotha. Le yinto eyenzeke kuwe ngamanye amaxesha. Kukho ukucotha okucacileyo kokusebenza Kwisixhobo. Ushiyeke ucinga xa usenza iinkqubo ezahlukeneyo, kwaye ngaphezulu kwesinye isihlandlo unokubanjwa ngokupheleleyo.
Oku kuyabonakala ukuba naxa sisenza imisebenzi yemihla ngemihla saqaphela ukuba ifowuni isebenza kancinci. Ukuba ukuvula iapps esiyisebenzisa rhoqo, okanye ngokulula kwisikhangeli, sele isinika iingxaki, ihlala iluphawu olucacileyo. Kukho amaxesha apho ukusebenza kancinci kunokunxulumana nokungabikho kwesithuba, kodwa ukuba ukhulule indawo okanye awunandawo ininzi yokuhlala, sele sisazi ukuba ngumcimbi wenkqubo.
Ibhetri yefowuni yakho ye-Android inobomi obuthile. Ukongeza, ngokusetyenziswa kwefowuni ngokwayo kunye nemijikelezo yokutshaja, ukunxiba kuyenziwa kuyo. Into ebangela ukunciphisa ukuzimela kwabo. Ukuba ifowuni yakho ibikhe yajikeleza okwethutyana, yinto oya kuthi uyiqaphele. Uya kubona ukuba ibhetri ihlala ixesha elincinci kakhulu.
Nangona ubhenela amaqhinga okunyusa, awuyi kulwenza olu tshintsho. Ukongeza, nokuba ulandela ingcebiso yokugcina ibhetri ikwimeko entle ngalo lonke ixesha, iphela ingaphepheki ukuba ezinye iimpahla ziya kuvela kwaye amandla ayo anciphise. Kwiifowuni ezininzi sinethuba lokutshintsha ibhetri. Nangona kuxhomekeke kwiminyaka yefowuni kunye neendleko, kukho iimeko apho kuhlawula ukuthenga i-smartphone entsha ye-Android.
Inguqulelo yakudala ye-Android
Olunye uphawu olucacileyo lokuba ifowuni yethu ye-Android indala inokuba njalo Inguqulelo esele iphelelwe lixesha. Okwangoku siphakathi kotshintsho phakathi kweOreo nePie. I-Oreo imalunga nokuba yeyona nguqulelo isetyenzisiweyo kwintengiso, inokuba kungangenyanga.
Kwelinye icala, enye indlela yokwazi ukuba ingxelo yakho iphelelwe lixesha ukuba uyekile ukufumana uhlaziyo. Uninzi lwebrand kwi-Android zihlala zinika iminyaka emibini yokuhlaziywa, nangona kukho iifowuni ezifumana kuphela uhlaziyo kwinkqubo yokusebenza. Ukuba sele uyekile ukuba nohlaziyo, luphawu olucacileyo lokuba umenzi akasayi kukuxhasa.
Kwakhona, ukusebenzisa inguqulelo yakudala ye-Android inenye ingxaki. Ukusukela uninzi izicelo ziyeke ukuxhasa kunye nokuhambelana. Ngokuhamba kwexesha, ngekhe ube nakho ukusebenzisa usetyenziso, njengoko kunjalo ngeChannel, kwifowuni yakho. Into ekunyanzelayo ukuba uye kukhangela i-smartphone entsha.
Iinkcukacha eziphelelwe lixesha
Enye indlela esinokuyisebenzisa ukwazi ukuba ixesha lifikile ukuthenga ifowuni entsha ye-Android, ukujonga iinkcukacha zefowuni. Siyawubona umohluko enawo nezinye izixhobo ezikhoyo ngoku kwintengiso. Iya kusinceda sikubone oku.
Ngokomzekelo, isivamvo somnwe yinto eqhelekileyo kwiifowuni ze-Android namhlanje (nokuba ingemva okanye yakhelwe kwiscreen). Ukuba i-smartphone yakho ayinayo, siyabona ukuba iwele ngasemva malunga noku. Iikhamera nazo zizinto ekufuneka ziqwalaselwe. Kubekho ukuphucuka okukhulu kule ndawo kwintengiso.
Ukuba ikhamera yethu imbi, Luphawu olucacileyo lokuba ayisiyiyo le nto yentengiso. Ngokukodwa ngoku sifumana uninzi lweefowuni zekhamera ezimbini phakathi kuluhlu, njengesiqhelo. Jonga iinkcukacha zefowuni yakho kwaye uya kuyazi ukuba kufanelekile ukuba uyihlaziye okanye hayi. Singazama ukuyenza ihlale ixesha elide, kodwa kuyeza ixesha apho ingasayi kuphinda isebenze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Wazi njani ukuba lixesha lokutshintsha iifowuni ze-Android
I-Galaxy Qaphela i-9 iqala ukufumana i-beta ye-Android 9 Pie nge-UI enye